Creative Natural Coconut Bowl & ဇွန်းအစုံ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အရောင်2ခွက်2ဇွန်းနှင့်2ပန်းကန် ခွက် ဇွန်းနှင့်ပန်းကန်လုံး3ခွက်3ဇွန်းနှင့်3ပန်းကန် ဇွန်း4ခွက်5ဇွန်းနှင့်5ပန်းကန်5ခွက်4ဇွန်းနှင့်4ပန်းကန်
2 ခွက်2ဇွန်းနှင့်2ပန်းကန် ခွက် ဇွန်းနှင့်ပန်းကန်လုံး3ခွက်3ဇွန်းနှင့်3ပန်းကန် ဇွန်း4ခွက်5ဇွန်းနှင့်5ပန်းကန်5ခွက်4ဇွန်းနှင့်4ပန်းကန်
Creative Natural Coconut Bowl & Spoon Set - ၂ ခွက် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
နည်းစနစ် - ထွင်းခြင်း
အရွယ်အစား: အချင်း 12-15cm / 4.72-5.90in, အမြင့် 4.5-6.5cm / 1.77-2.56in
အသုံးပြုမှု - အိမ်သိုလှောင်ခြင်းဖလား၊ ဆန်၊ အချိုပွဲ၊ သစ်သီး၊ မုန်နှင့်စသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အုန်းဖလားတွင်သဘာဝအုန်းဆီမျှဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ပါ။
လက်လုပ်အုန်းသီးပန်းကန်တစ်ခုစီကို NOVA37 အပိုအပျိုကညာအအေးဖိထားသောအုန်းဆီဖြင့်ဖုံးထားသည်။
အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောသဘာဝအုန်းသီးခွက်များကိုစားပွဲပေါ်၌တည်ငြိမ်စွာထားရှိနိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆီလီကွန်အခြေခံ ၄ ခုကိုအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးမည်။
59 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
၁၆ ရက်အတွင်း Pyaterochka သို့ပို့ဆောင်သည်။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီ, ပျက်စီးမှုမရှိဘဲလာကြ၏။ တကယ်တော့ ... သြတ္တပ္ပစိတ်ပေါ်ထုပ်ပိုး! ပျက်စီးမှုမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ခွက်တွေဟာသူတို့ရေးတဲ့အတိုင်းချောမွေ့ပေမယ့်ကြမ်းတမ်းတယ်။ ဒါဟာပို pialet ဖြစ်ပါတယ် !!! ထို့အပြင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်စားပွဲ ၄ တွင်တည်ငြိမ်ရန်ရာဘာကြိုးများရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့ကပုတီးအားဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ, ဒီမှာကောင်းသောငါးစျေးနှုန်းအဘို့ပင်ငါးအပိုင်းပိုင်းယူ))) !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
ပလတ်စတစ်နှင့်ရောစပ် Kinda ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်း။